यो विश्वविद्यालयको समस्याले सरकारलाई दुख्दैन ? - Aarthiknews
यो विश्वविद्यालयको समस्याले सरकारलाई दुख्दैन ?
सोमबार, ०५ जेठ २०७७
आज, बाध्य भएर म यो बिन्ति पत्र संचारमाध्यम मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पुर्याउने कोशिश गर्दैछु थाहा छैन उहाँको आँखासम्म वा कानसम्म पुग्छ कि पुग्दैन । तैपनि कोशिश त गर्नै प¥यो, अर्को कुनै उपाय छैन । पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पद रिक्त रहेको ९ महिना भयो । यसै बीचमा रजिष्ट्रार, डीन, परीक्षा नियन्त्रक, लगायतका पदाधिकारीहरुको म्याद सकिएर पदहरु रिक्त भएका छन् । यस बीच दुई पटक काम चलाउ उपकुलपति नियुक्ति भए ।
जति बेला नेपालका सबै विश्वविद्यालयहरुमा उपकुलपति पद रिक्त थियो हामीले विश्वास लिएका थियौं अब सरकारले ती सबै विश्वविद्यालयमा पूर्णकालीन (चारवर्षे) उपकुलपति नियुक्त गर्छ होला, दूर्भाग्य, अरु विश्वविद्यालयमा चारवर्षे उपकुलपति नियुक्ती गर्दै गर्दा पोखरा विश्वविद्यालयमा भने नियुक्त गर्न किन आवश्यक ठानेन । के पोखरा विश्वविद्यालय नेपाल सरकार अन्तर्गत होइन, के यो विश्वविद्यालयको समस्याले सरकारलाई दुख्दैन ? विश्वविद्यालय कुनै पार्टी वा खास मान्छेको होइन, यो सबैको हो, यसमा पक्ष वा प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन ।
यसमा प्रदेश वा केन्द्रिय सरकार भन्ने हुंदैन, यसमा कुनै वाद वा सिद्धान्त भन्ने पनि हुंदैन । यो देशको बौद्धिक धरोहर हो तर किन यस्तो संस्थालाई अपाङ्ग बनाउन खोजिदैछ? सरकार किन बेखबर भए जस्तो वाहना बनाइरहेको छ ? पोखरा विश्वविद्यालयलमा ६३ कलेज र ४० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरु आबद्ध छन्, भने झण्डै १०,००० रोजगारी उपलब्ध भएको छ । निजी क्षेत्रका कलेजहरुमा अर्बौ रुपैयां बराबरको पूंजी लगानी भएको छ । लाखौंको भाग्य र भविष्य जोडिएको यो शैक्षिक संस्थालाई ९ महिनासम्म प्रमुख कार्यकारी विहीन बनाएर राख्न कसरि सक्नु भयो प्रधानमन्त्रीज्यू? अनि यस बिषयमा गंभीरता पूर्वक लिन सक्नु भएन शिक्षा मन्त्री ज्यू ?
प्रधानमन्त्रीज्यू ? कस्तो मानिस खोज्नु भएको छ तपाईंले जुन नेपालमा आजसम्म फेला परेको छैन । विज्ञापन आव्हान गरेको थियो शिक्षा मन्त्रालयले उपकुलपतिको लागि र दर्जनौ इच्छुकहरुले आवेदन दिएको कुरा हामीले सुनेका थियौं । यदि ती आवेदकहरु योग्य पाउनु भएन भने पुनः बिज्ञापन गर्न कसले रोकेको छ र? कि कोही पनि तयार छैनन् पोखरा विश्वबिद्यालयलार्ई नेतृत्व दिन ? तपाईलाई थाह छैन, एउटा विश्वविद्यालयको मूल नेतृत्वदेखि त्यसको मुख्य पदाधिकारीहरु विहिन भएर रहंदा देशलाई के घाटा हुन्छ ?
तपाई त विश्वविद्यालय सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कुलपति हुनुहुन्छ, किन तपाईंलाई विश्वविद्यालय मन पर्दैन? कुनै रिस राग छ र यस विश्वविद्यालय प्रति ? तपाईंलाई कस्ले रोक्यो उपकुलपति नियुक्त गर्न । मलाई थाहा छ, नेपालको संसदीय अभ्यास बेलायतको वेष्ट मिनिष्टर प्रणाली जस्तो छ, जहां प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ र उसलाई जुनसुकै मन्त्रीले सहयोग गर्नु पर्दछ ।
मलाई लाग्छ, तपाईले चाहनु भयो भने एक मिनेटमा उपकुलपति नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ । र तपाईले चाहनु भएन भने विश्वविद्यालयलाई खण्डहर पनि बनाउन सक्नु हुन्छ । किनकी विद्यार्थीहरुको रिजल्ट रोकिएको छ, दैनिक प्रशासन रोकिएको छ । रणनैतिक योजनाहरु बन्न सकेको छैन, कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।
कोरोनाग्रस्त घडीमा कुनै निर्णय हुन नसक्दा विश्वविद्यालयमा चरम शैक्षिक संकट आइसकेको छ । भिसी नहुंदा कार्यकारी परिषद बैठक बस्न सकेको छैन, प्राज्ञिक परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन जसले गर्दा विगत ९ महिना देखि कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णयहरु हुन सकेका छैनन् । विस्तारै विश्वविद्यालय कोमामा जाने अवस्था छ । विश्वविद्यालयको यस्तो दुर्गती बारेमा शिक्षा मन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानकर्षण होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
हामी तमाम शिक्षक कर्मचारी विद्यार्थी, लगानीकर्ता र अभिभावक र सरोकारवालाहरु सबैको अनुरोध छ, भो, अति भो अब हामी पर्खन सक्दैनौ, छिटो भन्दा छिटो एक जना उपकुलपति नियुक्ति गरेर विश्वविद्यालयलाई रसातलमा भासिनु अगावै उद्धार गरिदिनुहोस्, हो चार वर्षे भिसि, तर पटके काम चलाउ नै पठाउने विचार गर्नु भएको छ भने किमार्थ हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन ।
(लेखक पोखरा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक हुन)
पारिश्रमिक र घरभाडा भुक्तानीका लागि बेग्लै कोष माग
‘निजी विद्यालय स्थानान्तण तथा मर्ज गरेर राष्ट्रियकरण गरौं’
त्रिविमाथि विद्यार्थीको विस्वास किन घटेको होला ? विद्यार्थी संख्या तीन वर्षदेखि निरन्तर घट्दो
एसइइको नतिजा प्रकाशन गर्न बोर्डले यस्तो कार्यविधि बनायो
निजी विद्यालयले शुल्क लिन थाले !
खरिद मूल्यभन्दा कर बढी, काठमाडौं आइपुग्दा १०२ रुपैयाँ
एसियामा गार्मेन्ट उद्योगका हजारौं कामदार बेरोजगार, अर्बौं डलर बराबरको अर्डर रद्द
‘यो वर्ष कमाउने होइन सरभाइभ गर्ने वर्ष हो, ब्याजदर घटाउन सकिन्छ’
डेलावालमात्र होइन घरबेटीसमेत आर्थिक समस्यामा परे